Flynas dia nanambara ny fahatarana amin'ny sidina mivantana eo anelanelan'ny KSA sy Seychelles
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Arabia Saodita » Flynas dia nanambara ny fahatarana amin'ny sidina mivantana eo anelanelan'ny KSA sy Seychelles
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Seychelles Flynas sidina
Nambara tamin'ny 1 Jolay 2021, ny fiandohan'ny sidina Flynas izay mampifandray ireo nosy Seychelles mankany amin'ny Fanjakana Saudi Arabia dia nahemotra amin'ny daty manaraka.
Ny fahatarana dia mifandraika amin'ny fahaizan'ny fiaramanidina vaovao A320 Neo voatendry any amin'ny toerana haleha.
Nanamafy i Flynas fa misy tetik'asa efa an-dàlam-pandrosoana ahazoan'ny fiaramanidina fahazoan-dàlana ETOPS aorian'izay hanombohana ny hetsika.
Seychelles dia nandray mpitsidika manodidina ny 300 avy any Arabia Saodita nanomboka ny volana Janoary 2021 ary vinavina lehibe ny vinavinan'ny faritra raha vantany vao esorina i Flynas fa hiala.
Ny fampahalalana nampitain'ny solontenan'ny Flynas tany amin'ny Seychelles Civil Aviation Authority dia manondro fa ny fanemorana ny sidina mivantana avy any Jeddah mankany Mahé dia mifandraika amin'ny fahaizan'ny fiaramanidina vaovao A320 Neo voatendry ho any amin'ny toerana aleha, misy fiatraikany amin'ny karama sy ny laharany. Nanamafy ihany koa ny kaompaniam-pitaterana fa misy ny tetik'asa an-dalam-pandrosoana mba hahazoan'ny fiaramanidina fahazoan-dàlana ETOPS aorian'izay hanombohana ny hetsika.
Ny minisitry ny raharaham-bahiny sy fizahan-tany any Seychelles, Andriamatoa Sylvestre Radegonde, dia nanamafy ny fanohanan'ny toerana ny sidina vaovao, izay tokony hiasa intelo isan-kerinandro, na eo aza ny fanemorana ny daty hanombohana.
“Ny fahatarana amin'ny fanombohana ny sidina Flynas mankany Seychelles dia fihemorana kely ihany, ary azonay antoka fa hovahan'izy ireo izany. Tsy misy fiatraikany mihitsy ny tetik'asa hataontsika eo amin'ny tsena ary manantena ny hahita azy ireo hipetraka atsy ho atsy izahay.
Aminy, ny sekretera lehiben'ny Departemantan'ny fizahan-tany, Ramatoa Sherin Francis, naneho hevitra fa na dia diso fanantenana aza izy fa tsy hiondrana any Seychelles i Flynas amin'ny volana jolay araka ny nomaniny tany am-boalohany, ny tanjona dia miandry ny fandraisana ireo mpandeha aminy amin'ny fotoana mahamety izany.
“Mampalahelo fa tsy ho tonga any Seychelles i Flynas araka ny voalaza tamin'ny volana jolay, saingy tsy hanakana anay tsy hanohy ny asanay hitazomana an'i Seychelles hita any amin'ny faritra izany. Vinavinainay fa hovahana tsy ho ela ny raharaha ary ny mpitsidika avy any Arabia Saodita sy ny faritra tsy ho ela dia ho voavaha, ”hoy Ramatoa Francis.
Nahatratra 300 eo ho eo ny mpitsidika avy any Arabia Saodita nanomboka ny volana Janoary 2021 ary tombanana lehibe no vinavinaina avy amin'ny faritra raha vantany vao manomboka manidina any Seychelles i Flynas. Ny fiaramanidina Flynas A320 Neo dia mahazaka mpandeha 174.